Top Videos from Dhamma Video - Page 5
201 5:07:42	Popular
Oxford ဆရာတော် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိ ၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံ တရားပွဲ (25-07-2015)
by Admin6years ago 721 Views /0Likes
202 1:51:07	Popular
သီတဂူ ဆရာတော် (ပရိတ်ကြီး-၁၁ သုတ်)
by Admin5years ago 719 Views /0Likes
203 56:25	Popular
Myouk Oo Sayadaw Dhamma taik at Sirimangala Monastery 6/3/2015 (4,pm)
by Kappiya6years ago 718 Views /0Likes
Myouk Oo Sayadaw Dhamma taik at Sirimangala Monastery 6/3/2015 (4,pm) - Captured Live on Ustream at
204 04:49	Popular
ရာဇာယတနသတ္တာဟ (လင်းလွန်းပင်)_ဆို- ထား၊
by Admin5years ago 717 Views /0Likes
ရာဇာယတနသတ္တာဟ (လင်းလွန်းပင်) ရေးသူမသိ၊ ဆို- ထား၊
205 2:37:24	Popular
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥာဏသံဝရ၏ စင်္ကာပူ တရားပွဲ ၂၁-၇-၂၀၁၅
by Admin6years ago 716 Views /0Likes
206 06:30	Popular
၀၂။ သဗ္ဗုဒ္ဓေ - တင်တင်မြ
207 05:57	Popular
by Admin6years ago 716 Views / 1 Likes
208 29:07	Popular
Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day 8 Part3(20 Jan 2015)
by Kappiya6years ago 715 Views /0Likes
209 56:01	Popular
ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ ( ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်)
by Admin5years ago 714 Views /0Likes
ပဲခူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ ဟောကြားတော်မူသော ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် ChanMyay Yeik Myaing Sayadaw Eleven Maha Paritta Suttas & Well-Wishing Gatha
210 06:35	Popular
သီတဂူ - တင်တင်မြ
by Admin6years ago 712 Views /0Likes
211 05:29	Popular
-ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ။ မဟာစည်ဆရာတော်-မင်းကွန်းဆရာတော်
by Admin3years ago 712 Views /0Likes
ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ။ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေး၍ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြေဆိုသည်။ လောဟိစ္စသုတ် (၁၇)(၁၉၆/၄၃၅) - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, UK), also at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796561
212 1:07:34	Popular
7 Mogok vipasana kmc school 7)days
by Kappiya6years ago 710 Views /0Likes
213 1:58:46	Popular
Monlei Sayadaw 2005 05 18 8am
by Admin6years ago 707 Views /0Likes
214 17:03	Popular
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်နှင့် ပဌာန်းတရားတော် အပိုင်း-၂
by Admin5years ago 707 Views /0Likes
မဟာစည်နယ်လှည့်ဓမ္မကထိက ဦးဥတ္တရ (M.A(India) ရွတ်ဖတ်ပူဇော်အပ်သော ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်နှင့် ပဌာန်းတရားတော် အပိုင်း-၂
215 1:31:22	Popular
Pilot Sayadaw Lan3Lan
by Admin6years ago 706 Views /0Likes
216 2:03:20	Popular
အာဠာဝက ဘီလူး အောင်တော်မူခန်း
ChanMyay Yeik Myaing Sayadaw ချမ်းမြေ့ရိပ်မြိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ (ပဲခူး) ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ
217 05:32	Popular
ပန်ဆုပြည့်ကျော် - ဂန္ထ၀င်မေမေ
218 08:49	Popular
by Admin5years ago 706 Views /0Likes
219 05:26	Popular
by Admin6years ago 705 Views /0Likes
ဒေါ်မေရှင် Image :en.wikipedia.org http://en.wikipedia.org/wiki/May_Shin Credit to Ko Htin Maw (Soe San Recording) for keeping these songs in good quality Source: Soe San Recording
220 16:59	Popular
အပိုင်း ၈ ပဋ္ဌာန်း ကျမ်ကြီးနှင့် ရှင်ဝိမလ
221 01:04	Popular
ဩကာသ ဘုရားရှိခိုး - ဆရာတော်ဦးဝါသေဋ္ဌ (မြန်မာနက်)
by Admin6years ago 704 Views /0Likes
ဆရာတော်ဦးဝါသေဋ္ဌ - ဩကာသ ဘုရားရှိခိုး This traditional Okasa Puja Recitation was made by Venerable U Vasetta (War Seit Ta) and recorded at the Lonodn Mogok Yeiktha in December 2004. This is the English Translation: Okasa Okasa Okasa. More Dhamma Talks by My
222 07:06	Popular
သရဏဂုံ သစ္စာ မေတ္တာပို့ 
223 1:02:20	Popular
ပဌာနျးအမှနျးပါဠိတျော - မငျးကှနျးဆရာတျော ဦးဝိစိတ်တသာရာဘိဝံသ
by Admin4years ago 702 Views / 1 Likes
224 1:02:48	Popular
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်
by Admin6years ago 701 Views /0Likes
225 04:53	Popular
မင်္ဂလသုတ် ( နီပေါဆရာတော် )
by Admin5years ago 701 Views /0Likes
226 55:06	Popular
Mahar Myaing Tawya Thae Phyu Sayadaw U Pannya Zawta Day-7 6pm
by Admin6years ago 699 Views /0Likes
227 1:19:50	Popular
SHWE SAN PIN SAYARDAW MORNING DHAMMA TALK LIVE WEBCAST 26/7/15
by Admin6years ago 698 Views /0Likes
228 48:53	Popular
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် တရားတော် 'Eleven Maha Paritta Suttas''
မစင်္ကြာ ဆရာတော် ဦးလက္ခဏ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် တရားတော် Myasatkyar SayaDawU Latkana- Eleven Maha Paritta Suttas
229 16:54	Popular
မင်းကျော်စွာ နှင့် တောင်ပြုံးမင်းညီနောင် နတ်ချင်းများ - ကိုထွန်းရွှေ၊ ခင်ခင်မြင့်၊ တင်တင်မြ
230 1:09:57	Popular
ဆရာတော် ဦးဇောတိက - “ဘ၀၏အဆင့်အတန်း” တရားတော်
by Admin5years ago 698 Views /0Likes
ဆရာတော် ဦးဇောတိက “ဘ၀၏အဆင့်အတန်း” တရားတော်
231 17:03	Popular
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်နှင့် ပဌာန်းတရားတော် အပိုင်း-၃
by Admin5years ago 694 Views /0Likes
မဟာစည်နယ်လှည့်ဓမ္မကထိက ဦးဥတ္တရ (M.A(India) ရွတ်ဖတ်ပူဇော်အပ်သော ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်နှင့် ပဌာန်းတရားတော် အပိုင်း-၁
232 31:20	Popular
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် (၂/၂) စွန်းလွန်းဆရာတော် ဦးဝိနယ (Sunlun)
Sayadaw uvinaya - Photo Credit - Junior WIn http://juniorwin-english.blogspot.sg/2012/10/our-venerable-monk-sunlun-sayadaw-u.html
233 1:58:46	Popular
Monlei Sayadaw 2005 05 14 8am
by Admin6years ago 691 Views /0Likes
234 1:19:15	Popular
SHWE PYI HEIN SAYARDAW EVENING DHAMMA TALK LIVE WEBCAST 9/8/15
by Admin6years ago 690 Views /0Likes
235 1:59:06	Popular
DhammaThabin by Shwe San Pin Sayadaw Ashin Waiponla
by Admin6years ago 689 Views /0Likes
236 28:11	Popular
Tay Bon Mar- Tin Tin Mya, Yee Yee Thant, Maung Maung Gyi- Myanmar Buddhist Dhamma Song
by Admin6years ago 688 Views /0Likes
Composed by U Pyone Cho. I have uploaded6versions of the song 1 Daw Khin Nyunt's version with Laeti Sayadaw's introductory Tay Htat2Mar Mar Aye's version3Yee Yee Thant's version with Myanmar harp4Yee Yee Thant's version with Pattala5Yee Yee Than
237 1:04:34	Popular
ပဌာန်း၊ ဘုရားအနေကဇာတင် နှင့် ခွန်နှစ်ရက် သားသမီး မေတ္တာပို့ တရားတော် - ဆရာတော် ဦးနန္ဒမဉ္ဇူသာ
by Admin3years ago 688 Views /0Likes
မဟာကန်ပက်လည် ဆရာတော် ဦးနန္ဒမဉ္ဇူသာဟောကြား ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇယ် တော်မူသော ပဌာန်း၊ ဘုရားအနေကဇာတင် နှင့် ခွန်နှစ်ရက် သားသမီး မေတ္တာပို့ တရားတော် - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also at https://www.facebook.com/DhammaDanaMyanmar)
238 03:19	Popular
သီတဂူဆရာတော် -မေတ္တာပို့( ပရိတ် )
by Admin5years ago 686 Views /0Likes
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အဓိပတိ မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရအဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ- သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသော-မေတ္တာပို့( ပရိတ် ) SayaDaw U Nyanissara
239 13:04	Popular
သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရ - တရားစခန် Azusa, Los Angeles, U.S.A စတုထ္ထနေ့ (ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၆) နေ့
by Dhamma-dana5years ago 686 Views /0Likes
240 1:26:20	Popular
Pilot Sayadaw Khin Poon Gyi Sal Par
by Admin6years ago 684 Views /0Likes
241 1:10:02	Popular
171th MEDITATION RETREAT -SAYARDA U KAW THA LA -AFTERNOON DHAMMA TALK LIVE WEBCAST 16.8.15
242 10:15	Popular
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်နှင့် ပဌာန်းတရားတော် အပိုင်း-၄
by Admin5years ago 684 Views /0Likes
မဟာစည်နယ်လှည့်ဓမ္မကထိက ဦးဥတ္တရ (M.A(India) ရွတ်ဖတ်ပူဇော်အပ်သော ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်နှင့် ပဌာန်းတရားတော် အပိုင်း-၄
243 1:02:24	Popular
လေယာဉ်ကွင်းဆရာတော် ဦးဇောတိက''အလုပ်ပေးတရားတော်(၁)'' (၂၂.၁၀.၁၄)ပထမနေ့ ၄နာရီ
by Admin5years ago 683 Views /0Likes
လေယာဉ်ကွင်းဆရာတော် ဦးဇောတိက ဟောကြားတော်မူအပ်သော '' အလုပ်ပေး တရားတော်(၁) '' (၁၃၂)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ တရားစခန်း -ဓမ္မမောင်နှမအဖွဲ့စင်္ကာပူ--(၅)ရက်တာ တရားစခန်းပထမနေ့ ညနေပိုင်း ၄နာရီ (၂၂.၁၀.၂၀၁၄) တရားစခန်း တည်နေရာ Function Room 1, The ARENA Country Club, 511 U
244 11:20	Popular
Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day2Part3(13 Jan 2015)
by Kappiya6years ago 682 Views /0Likes
245 1:20:27	Popular
Thitagu Sayadaw - 23 dec 2012 - Singapore
by Admin6years ago 681 Views /0Likes
246 46:24	Popular
သဲဖြူ နှင့် မဟာမြိုင်တောရ'''ပဉ္စမနေ့ ပရိတ် တရားတော် နှင့် သံဝေဂ တရားတော်''၁၅.၇.၂၀၁၅မနက်ပိုင်း ၀၄း၃၀
247 45:43	Popular
by Admin6years ago 679 Views /0Likes
အရှင်တိက္ခဥာဏ (B.A) Indo-Aryan ဘာသန္တရဆေက ဓမ္မာစရိယ (Y.B.U) M.A (Thesis) M.C.U Bangkok ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်အပ်သော ပရိတ်ကြီး (၁၁)သုတ် ပါဠိတော်
248 15:04	Popular
ပုဂံမြို့ဟောင်းတစ်နေရာ - Tin Tin Mya
ပုဂံမြို့ဟောင်းတစ်နေရာ, စောင်းအိုလုလင်ဇာတ်ကြောင်းပြန် - တင်တင်မြ (ရေး - ကိုကျော့မှုး) Composed by Ko Kyau Mhuu Myanmar Song (http://www.facebook.com/groups/BurmeseSongs/)
249 1:06:42	Popular
Mahar Myaing Tawya Thae Phyu Sayadaw U Pannya Zawta Day-9 8am
by Admin6years ago 678 Views /0Likes
250 55:55	Popular
9 Mogok vipasana7din ko naag bahal ilanani ma
by Kappiya6years ago 677 Views /0Likes